News in Shona 22-02-07 - The Zimbabwean
News in Shona 22-02-07
VaMorgan Tsvangirai vachiedza kunyengetedza mapurisa kuti aregere vanhu vachipinda munhandare yeZimbabwe Grounds kurari yeMDC.
"Sarudzo Gore Rinou
ya” – Tsvangirai
HARARE – Mutungamiri weMDC VaMorgan Tsvangirai vakatumira mashoko kumhuri yose yeZimbabwe vachiti:
“Ndinokutendai mhuri yose yeZimbabwe inoda runyararo nokushinga kwamakaita kunangana nechihurumende muchitaura zvamunoda. Zvava pachena kuti vanhu havachadi zvokuramba vachibatwa nehuchapa asi kuti vava kutoda kurwisana nehurumende nenzira itsva.
NeSvondo vanhu muHarare vakaratidza kuzvibata apo vakasangana nemhondi dzakange dzatengwa kuti dzityore mutemo wakaiswa nedare guru redzimhosva waitibvumira kuita rari yedu muZimbabwe Grounds.
Taona kuti mapurisa edu chaiwo akadzidzira chipurisa haasisina simba, saka vakatadza kutichengetedza kuti raari yedu iitwe murunyararo.
Zvakaitika zvakaratidza kuti kwava nehumwe hutongi hwakatotora nyika, nokuti President Robert Mugabe vaona kuti zvaipa havachavimbi nemapurisa chaiwo anotevedzera chipurisa asi mamilitia nemabhurakwacha akamirira kuita basa reZanu (PF) chero zvazvo vari kutyora mutemo nokuti vava kurwisa vanhu.
Vanhu vemuZimbabwe vanoda runyararo, saka vakaramba dzimwe nzira dzose dzekutsvaga kubvisa hurumende, nokuti vanovimba nemaitirwo ematongerwo enyika muZimbabwe kuti anokwanisa kuita kuti zvido zvavo zvinzwikwe.
Tichaona kutonga kweruzhinji neshanduko ichiitika murunyararo, asi nguva yacho yakwana yekushandura zvinhu.
Hama dzangu nyika yedu yakabvumirana kuti kana tikasabatana kurwisa muvengi, hapana kwatinosvika.
Tose tinobvumirana kuti mamiriro aita zvinhu haachaiti, ramangwana redu semhuri hapachisina kunze kwekuti tikazviburitsa munjodzi iyi.
Takanangana nesarudzo yemutungamiri wenyika mugore ra2008 tichiziva kuti sarudzo iyi ichatipa nguva yakanaka yekumisa matakanana aya nokutanga kuvaka nyika yedu patsva nekupodzana panhamo dzose dzatakaona.
Tinoda kupinda musarudzo iyi tiine bumbiro idzva remutemo kuti vanhu vave neruvimbo zvekare nemasarudzo, kwete masarudzo anoburitsa zvinhu zvisingagutsi vanhu.
Tinovimba kuti nguva yakwana yokuti vanhu vachiuya vose kuti titaure neizwi rimwe kuti tibude mudambudziko.”
Mapurisa otyora mutemo kumisa rhari yeMDC
Pandakasvika panhandare nguva dzamangwanani asi zuva rakwira ndakashamisika kuona manyama amire nerongo, mapurisa akazara, nhandare yakavharwa vanhu vava kutodzokera vakasuwa. Ndakaona VaMorgan Tsvangirai vachikakavadzana nemapurisa vachivaratidza gwaro rekudare redzimhosva rairatidza kuti vane mvumo yekuita rari yavo ipapo.
Pakabva pasvika marori ane varume vane zvombo vaisvika kuma200. Nguva shomashoma Highfield yakanga yabaka nemazimotokari emarayoti akabva kuIsraeli achimwaya utsi hunokachidza nemabhomba emvura.
Zvaiita sebhaisikopo mazimotokari acho achidzinganisa vanhu vasina kana zvombo achivamwaya neutsi nekurova munhu wose neakanga aisiri kutiza achibva panzvimbo.
Zvikwata zvemarayoti zvakapindawo muzvitoro nemumachechi ari pedyo neMachipisa.
Nguva shoma yakazotevera pakange pasara mapurisa chete, vanhu vazhinji vakarara vakakuvara mumigwagwa.
Ndakarangarira chiso chaJangano paakatiudza kuti, “Vahwina, chiendai henyu munoita rari yenyu”. Ndakarangarira zvakare gurukota rekudziirira nyika VaDidymus Mutasa vachiti, “Hurumende ine nzira dzekurakasha tuvanhu tunoda kuita zvisina basa.”
Kucherechedza makore mashanu e”Rudo Rwakaoma”
NaMai Magodonga Mahlangu
BULAWAYO – Ndakasungwa musi waFebruary 13 muBulawayo City Centre, mushure mekunge tafamba tichicherechedza makore mashanu ekunge taita kuratidzira kwedu kweValentine’s Day nekuburitsa chirongwa che’The People’s Charter” icho chakamirira kupa vanhu hupenyu huri nani.
Ndakange ndakachengeterwa kwangu ndega paBulawayo Central Police Station kwemazuva maviri, nokuti ndizvo zvakange zvataurwa naOfficer in Charge weCID Law and Order, anonzi G. Ndlovu.
Patakasungwa takarohwa zvakasimba tichikwira masteps aikwira kumusoro tichirohwa pose pataipfuura. Vamwe vaimanikidzwa kuisa mapepa avakange vakatakura mumukanwa uko vachirohwa nembama.
Takazoendeswa kuBulawayo Central kwatakagariswa mumacorridors nemumahofisi tisina kana mhosva yatakaudzwa kuti takapara. Tese tiri 83 takagarazve takamanikidzana panze pehofisi yaNdlovu, tichirambidzwa kuonekwa nemagweta.
Musi waFebruary 15 ndakanzwa mumwe mupurisa achitaura pafoni kuti, ‘Handina basa kuti iwe ndiwe ani kana uri wekwaPresident kana KuCIO, ini vanhu ava ndichavaendesa kuLaw and Order chete, ndiwo mutemo.’
Ndakatya ndikati nhasi tava kuzonourayiwa zvino sezvatakange tambovimbiswa.
Takazoendeswazve kuBulawayo Central ndokuzonopihwa mhosva kwapera 36 hours, pamwe chete nevamwe vedu. Pandakabuda nevamwe vangu takatenda Mwari. Ndinopa kutenda kuvamwe vangu vakatitarisira nemamwe mapurisawo atinotoona sehama dzedu huhondo yatinayo.
CIO tortures teachers as strike continues
CIO yoshungurudza maticha, kuramwa basa kuchienderera
HARARE – Kuramwa mabasa kwematicha kuchienda mberi, hurumende yaisa maCIO kuti ashushe nekushungurudza maticha anoda kuramwa mabasa.
“Maticha aneta nekuitirwa tsvina voudzwa kuti kwanaya tsvina,” akadaro mumwe mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ), Takavafira Zhou, apo akaramba achiti kuramwa basa hakwaizomiswa nekushushwa.
Mumwe murairidzi wekuChitungwiza akataura nezvendondo yaakaoneswa nemaCIO: “Vakandiendesa kumahofisi avo vakanditi ndakatengwa naTony Blair kuti ndizonyonganisa nyika nekubvisa hurumende. Ndakazviramba, asi vakandirova nekundipisa nemagetsi mubhurugwa nepasi petsoka, ndokundiregedza vachiti, “Chienda unoudza vamwe vako kuti vadzoke kubasa.”
Johannes Kuyedza anorairidza kuKuwadzana kubvira paakapedza chikoro chake paMkoba Teachers College,
akati, “Mari yandinohora iri pasi Z$100 000 uye takaudzwa kuti kana yakwidzwa haisi kuzopfuura Z$180 000”.
“Chindiudzaiwo kuti ndinoitei nemari iyi, iyo rent yoga ndichibhadhara $250 000. Chinonyanya kuipa ndechekuti vanotitumira maCIO kuzotinetsa asi vasingateeri zvichemo zvedu.”
Hurumende yakati ichakwidza mari asi maticha akati anombomira zvokuenda kubasa kusvika vaona mapayslip avo. Vakati kana tikaona zviri zvematakanana kuramwa mabasa kwava kuzonyatsochitanga.
Gurukota rezvedzidzo VaAenias Chigwedere vari kuramba vachiomesa vachiita sekuti vanoda kudzivirira vabereki kumari dzezvikoro dzakanyanya kukwira. Itai Dzamara